05-06-2009 03:49 PM #11
အခုလောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော် လေ့လာနေပါတယ်..
အစ်ကိုပြောသလို ကျွန်တော် လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်..
ကျွန်တော်သိသလောက် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးသိစေရပါမယ်..
The Following User Says Thank You to ဖန်ဆင်းရှင် For This Useful Post:
06-08-2009 09:12 AM #12
ကျွန်တော် ဒီနေရာလေးမှာ video editing နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကို
သူငယ်ချင်းတို့နဲ့အတူ ဆွေးနွေးသွားချင်ပါတယ်..ကျွန်တော်သိထားတာလေးတွေလည်း ပြောပြမယ်
ဖိုရမ်ကြီးနှင့်လေ့လာနေသူအားလုံးကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေကူညီပေးသွားရအောင်လား ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်က လောလောဆယ် Adobe Premiere Pro 2.0 နဲ့ editing အပိုင်းကို လေ့လာနေပါတယ်
VCD စာတန်းထိုးဖို့အတွက်ကိုတော့ Power Video Karaoke နဲ့လေ့လာနေပါတယ်..
စိတ်ဝင်စားတဲ့သူငယ်များကိုလည်း ဒီနေရာလေးမှ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..
ကျွန်တော့်ကိုလည်း မေးနိုင်ပါတယ်..ကျွန်တော်ကလည်း ပြန်မေးချင်ပါတယ်..
06-09-2009 10:49 AM #13
ဒီနေ့တော့ အချိန်လေးနဲနဲရလို့ Adobe Premiere Pro အကြောင်းလေး စပြောရအောင်...
program ကိုဖွင့်တာနဲ့ new project box လေးတက်လာပါမယ်..
အဲဒီနေရာမှာ အဓိကရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိပါတယ်..အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ မိမိအသုံးပြုမယ့်
video standard ပါပဲ..အာရှမှာတော့ NTSC ကိုသုံးပါတယ်...အဲဒါဆိုရင်
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း DV-NTSC အောက်က တစ်ခုခုကိုတော့ ရွေးရမယ်သေချာနေပြီ..
အဲဒီမှာကိုယ်က TV Screen ကို ရိုးရိုး standard ပဲ သုံးမှာလား...နောက် မြင်ကွင်းကျယ်သုံးမှာလားဆိုတာကို
စဉ်းစားရပါမယ်... Standard ဆိုရင် screen ratio က 4:3 ပါ
Wide Screen (မြင်းကွင်းကျယ်) ရဲ့ screen ratio က 16:9 ပါ
ဒီလောက်ဆိုရင် ကိုယ့်သုံးမယ့်အပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်လို့ရပါပြီ..
ရွေးပြီးရင်တော့ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..ဒါဆိုရင် Project အသစ်ကိုစပြီးလုပ်ဆောင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ
06-10-2009 05:08 PM #14
new project စပြီးပြီဆိုရင် သူ့မှာရှိတဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေအကြောင်းကို
နံပါတ် (1) ဆိုတဲ့ နေရာလေးသည် ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ။ video တွေ သီချင်းတွေ အားလုံးက
File Menu&gt;&gt;&gt;Import လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီနေရာကို အကုန်ရောက်ပါတယ်..အဲဒီကနေမှာ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့နေရာကို
draft ဆွဲပြီး ယူသုံးလို့ရပါတယ်..Photoshop မှာ layer တွေခွဲထားသလိုပါပဲ။။
နံပါတ် (2) ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ Source , Effect Control,Audio Mixer ဆိုပြီး ခေါင်စဉ်သုံးခုရှိပါတယ်..
Source ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်မယ်ဆိုရင် source မှာ လုပ်လို့ရပါတယ်..
Effect control ကတော့ အဓိကအကျဆုံးပါ..သူ့မှာ Motion နဲ့ Opacity ဆိုပြီးရှိပါတယ်..
Motion ကတော့ video တွေကို ဘယ်လိုရွေ့လျားအောင်လုပ်မလဲ..ဘယ်လောက်အနေအထားနဲ့ မြင်စေချင်လဲ..
တော်တော်များများလေး စိတ်ကူးရှိသလောက်လုပ်လို့ရပါတယ်..Opacity ကတော့ အလင်းအမှောင်ချိန်လို့ရပါတယ်..
Audio Mixer ကတော့ အသံနဲ့ပတ်သက်တာတွေကို edit လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
နံပါတ် (3) ကတော့ ကျွန်တော်တို့လုပ်သမျှကို အဲဒီ screen ကနေ play လုပ်လို့ရပါတယ်..
နံပါတ် (4) ကတော့ video effect/ transition , Audio Effect/Transition တွေပါ..
Premiere မှာက effect တော်တော်လေးစုံပါတယ်...
နံပါတ် (5)ကတော့ Time Line ပါ..သူလည်း အရေးကြီးပါတယ်..video နဲ့ audio နဲ့ရောတဲ့နေရာမှာဆိုရင်
timeline ကပိုပြီးအရေးပါပါတယ်..နံပါတ် (၁)မှာ ရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို draft ဆွဲပြီး time line ပေါ်ကို ဆွဲတင်ပြီးမှ
နံပါတ် (6) ကတော့ toolbar ပါ ..အဲဒီ toolbar တစ်ခုခြင်းဆီရဲ့ အသုံးပြုပုံကိုတော့
ဒါတွေက ကျွန်တော်သိသလို၊သိသလောက်လေး ပြောပြတာပါခင်ဗျာ..
06-24-2009 01:56 AM #15
အကိုတို့ရေ ကျွန်တော်လည်း video edit လေ့လာနေသူပါ
ကျွန်တော်သုံးတာက Adobe Premiere Pro v7.0 ပါ သူနောက်မှာ အသစ်အသစ်တွေ ပေါ်နေသော်လည်း ပြောင်းမသုံးဖြစ်သေးပါ
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့မှာက canopus ကထုတ်တဲ့ videoFX transitions third party software လေးတွဲသုံးလို့ရတယ်
အခြား version တွေနဲ့ က သုံးလို့မဘူးဖြစ်နေတယ်
ကျွန်တော်ကို Adobe Premiere Pro CS3 နဲ့တွဲသုံးလို့ရမယ့် third party software လေးများရှိရင် မျှဝေပေးကြပါ
when u remember, forget me pls
The Following User Says Thank You to phoenay For This Useful Post:
06-27-2009 04:02 AM #16
The Following User Says Thank You to papagyi For This Useful Post:
06-30-2009 10:10 AM #17
ဆောရီးဗျာ...ကျွန်တော်လည်း အခုတစ်လော ခရီးပဲလှည့်ထွက်နေရလို့ ဖိုရမ်ကို
အရင်လို ပုံမှန်မ၀င်ဖြစ်လို့ပါ...အချိန်ရတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ ရေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်...
07-08-2009 02:47 PM #18
အခုကျွန်တော် project တစ်ခုကဘယ်လိုစတယ်ဆိုတာပြောပြပါမယ်
file&gt;&gt;&gt;import ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်ပြင်ချင်တဲ့ video ကိုထည့်ပါခင်ဗျာ...
import လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် အဲဒီဖိုင်ကို draft ဆွဲပြီး timeline ပေါ်ကိုတင်ပြီး
အောက်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကို video ဖိုင်လေးနဲ့ တင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
12-23-2009 03:06 PM #19
hi အစ်ကိုတို့ အစ်မ တို့ ကျွန်တော် တစ်ခုလောက်သိချင်လို့ပါ ပြောပြပါဦးဗျ Adobe Premier ထဲ မှာ ကိုယ်ထည့်လိုက်တာတွေကို သူ့အလိုလို Cut ခွဲပေးအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ကိုပြောပြပေးကြပါဦးဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :&#039;( :&#039;(
The Following User Says Thank You to crystalhein For This Useful Post:
12-28-2009 11:08 AM #20
crystalhein ရေ သူ့ အလိုလိုတော့ cut ခွဲတယ်လို့ တော့ မတွေ့ မိသေးဘူးခင်ဗျာ .. အခက်အခဲကို ဒီထက်ပိုပြီး အသေးစိတ်ပြောပြနိုင်ရင်တော့ ကူညီနိုင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ခုလောလောဆယ် ကျွန်တော် Premiere Pro နဲ့Project တစ်ခုလုပ်နေပါတယ်။
The Following User Says Thank You to konge For This Useful Post: